स्वास्थ्य Archives - Page 8 of 52 - Vishwa News
​संसारमा फेरी तिव्र रुपमा फैलँदै कोरोना, सोमबार रेकर्ड ब्रेक
काठमाडौं । संसारमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले पुनः गति लिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार एकैदिन भेटिने संक्रमितको संख्यामा सोमबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो । २४ घण्टामा विश्वभर २ लाख ६० हजार संक्रमित थपिए । यो संख्या एकै
July 20, 2020 विस्तृतमा »
नेपालमा कोरोना परीक्षण कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतमाथि
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना परीक्षण संख्या ३ लाख नाघेको छ । यससँगै नेपालमा कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत भन्दा माथि व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको पिसिआर विधिबाट परीक्षण सम्पन्न भएको छ । सरकारले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमा परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको
July 19, 2020 विस्तृतमा »
४ पाइलटसहित नेपाल एयरलाइन्सका १४ कर्मचारीले जिते कोरोना
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका चार पाइलटसहित १४ जना उडान कर्मचारीले कोरोनालाई जित्न सफल भएका छन् । उनीहरुको तेस्रो चरणको कोरोना पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ आएको हो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएका सबै कर्मचारीलाई परीक्षणपछि घर पठाइएको छ। दुई साताअघि नेपाल एयरलाइन्किा १४
काठमाडौं । नेपालका ६ वटा जिल्ला कोरोना मुक्त बनेका छन् । शनिबारसम्मको तथ्यांक अनुसार ६ वटा जिल्लामा अब एक जना पनि कोरोना संक्रमणका सक्रिय बिरामी छैनन् । यसअघि नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कोरोना फैलिएको थियो । तर, डिस्चार्ज हुनेको संख्या
July 18, 2020 विस्तृतमा »
काठमाडौं । शनिबार नेपालमा कोराना भाइरससम्बन्धी सकारात्मक खबर सार्वजनिक भएको छ । शनिबार कोरोना भाइरसका ५७ जना मात्र थप संक्रमित भेटिएका छन् । यो संख्या पछिल्लो दुई महिनायता कै सबैभन्दा कम हो । लगातार माथि चढ्दै गएको कोरोनाको ग्राफ पछिल्ला
विश्वभर कोरोनाले ज्यान गुमाउने ६ लाखभन्दा माथि, संक्रमण डेढ करोड नजिक
काठमाडौं । संसारका करीव डेढ करोड मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । कोभिड–१९ बाट विश्वभर अहिलेसम्म १ करोड ४० लाख ३७ हजार २१ जना मानिस संक्रमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुमध्ये ६ लाख ६६५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका
न्युयोर्क अमेरिकामा बिहिबार ७७ हजार कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन् ।बिहीबार पुष्टि भएको यो संख्या अमेरिकामा एकै दिन पुष्टि भएका कोरोना संक्रमितको आजसम्म कै सर्वाधिक संख्याको नयाँ रेकर्ड हो । यसअघि यसै हप्ता मंगलबार ६७ हजार ४ सय १७ एकै
July 17, 2020 विस्तृतमा »
धरान । नेपालमा कोरोनाबाट थप एक जनाको मत्यु भएको छ । अब नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० पुगेको छ । शुक्रबार बिहान कोरोना संक्रमणका कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत एक जनाको मृत्यु भएको हो । सप्तरी
नवलपरासी र चितवनमा थपिए १९ संक्रमित
चितवन । कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर केही कम भएको छ । खासगरी भारतबाट आउने मानिसको संख्या घटेको र विदेशबाट फर्कनेको पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गरिएका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएको छ । समुदायस्तरमा भने अहिलेसम्म भयानक रुपमा कोरोना फैलिएको पाइएको
‘अत्यावश्यक नपरेसम्म सार्वजनिक बसमा नचढ्नु’
काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक नपरेसम्म सार्वजनिक यातायातमा नचढ्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ । सार्वजनिक यातायात खुला गरेपनि यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई बिस्तार गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै अति आवश्यक काम नपरेसम्म सार्वजनिक यातायात नचढ्न सरकारले सचेत बनाएको छ । सडकमा केही
July 14, 2020 विस्तृतमा »
म्याग्दी । म्याग्दीमा पहिरोमा परी ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या २८ पुगेको छ । आइतबार एक जनाको शव फेला परेको हो । उनीहरुमध्ये १९ जनाको भने सामुहिक अन्त्येष्टी गरिएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका–६, ठाडाखानी, धवलागिरी–६, मराङ र मालिका–७, विममा गएको बाढी
July 13, 2020 विस्तृतमा »
July 12, 2020 विस्तृतमा »
अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा प्रहरीसमेत मुछियो
काठमाडौं । अघिल्लो जेठमा भएको एक मृगौला प्रत्यारोपणमा नक्कली नाता सम्बन्ध कायम गरी मृगौला किनबेच प्रकरणमा प्रहरीको समेत संलग्नता खुलेको छ । २०७६ जेठ २७ मा चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा भएको मृगौला प्रत्यारोपणमा नक्कली भान्जा खडा गरी मृगौला दिएको
भाइरस हावाबाट एकआपसमा कसरी सर्दछ ? कसरी बच्ने ? हेर्नुहोस् – एक खोज
न्युयोर्क कोरोना लगायत बिभिन्न किसिमका भाइरसहरु हावामा कसरी रहन्छन् ? एक व्यक्तिको शरीरबाट निस्काषित भाइरसयुक्त खकार-बिकार कसरी फैलन्छ ? भन्ने बिषयमा जापानका प्राध्यापकहरुले गरेको एक सुक्ष्म अध्ययन सार्वजनिक गरका छन् । https://youtu.be/EPNBHuu755E यस अध्ययनका अनुसार मास्क, सामाजिक दुरी र हावा